Nidaamyada shaqo ee kala duwan iyo shirkadlayda gaarka ah
Shaqaalayn sii soconaysa
Shaqaalayn sii soconaysa, xitaa lagu magacaabo shaqo joogto ah dhanka luqadad maalinlaha ah, micnaheedu waa in shaqadan soconayso ilaa inta adigu aad doonayso inaad joojiso, lagu ruqsadaynayo ama aad galayso hawl-gabnimo. Ma jirto taariikh go'an oo ah marka shaqadani joogsanayso.
Shaqada xilliga fasaxa iyo shaqo xilliyeed
Shaqada xilliga xagaaga ama shaqada xilliga tusaale ahaan fasaxa kirismiska waxaa lagu magacaabaa shaqada xilliga fasaxa. Shaqooyinka kale ee jira xilliyo go'an oo sanadki ah oo keliya waxaa lagu magacaaba shaqo xillyeed. Tani waxay ahaan kartaa tusaale ahaan in laga shaqeeyo meesha laga dhisto taambuug ama buudhi si loo dego xagaaga ama goobta ciyaaraha barafka xilliga jiilaalka.
Qof iskii u shaqaysta
Qof iskii u shaqaysta badanaaba waa qof shirkad gaar u ah leh oo alaabtiisa ama adeegyadiisa ka iibiya shirkad. Waxay ahaan kartaa maqaal loo qoro joornaal. Kooxaha xirfada ee caadiyan iskood u shaqaysta waa suxufiyiinta iyo sawirlayaasha. Qaarkood waxay shaqeeyaan iyagoo gurigooda jooga, qaarna waxay dhismo shaqo la wadaagaan dad kale oo iskood u shaqaysta.
Wakhti buuxa ama wakhti nus ah
Shaqo wakhti buuxa ah caadiyan gudaha Iswiidhan waa 40 saacadood oo wakhti shaqo ah calaa toddobaadkii. Wakhti buuxa waxay la mid tahay boqolkiiba 100. Haddii aad shaqayso wakhti nus ah waxaad helaysaa mushahaaro ku xisaabsan inta ay u dhiganto boqolkiiba shaqo wakhti buuxa ah oo aad shaqayso. Haddii aad haysato shaqo wakhti nus ah oo aad shaqayso wakhtiyo shaqo oo aan caadi ahayn markaas waxaad tahay shaqaale saacadlay ah oo waxaad mushahaaro ku helaysaa calaa saacad.
Qofka xirfad ka baranaya meel shaqo
Shaqada xirfad ka barashada meel shaqo waa nidaam shaqo oo gaar ah taas oo ah inaad sii wadanayso inaad wax ka barato dhanka aaga xirfadaada, laakiin maaha gudaha iskoolka balse waa goob shaqo, lehna mushahaarada la siiyo qofka xirfad ka baranaya meel shaqo. En vanlig utbildningstid för till exempel elektriker eller skomakarlärling är ungefär ett år.
Shaqaale mashruuc waxaad tahay marka laguu shaqaalaysiiyay si aad u fuliso nooc mashruuc ah. Marka mashruucani dhamaado waxaa xitaa joogsanaysa shaqadan. Haddii adiga ama shaqo-bixiyuhu doonaysaan inaad joojisaan heshiiskan waa inaad idinku si wada-jir ah ugu heshiisaan arintan.
Shaqo tijaabo ah
Marka aad hesho shaqo cusub waxay ku bilaabmi kartaa inaad hesho shaqo tijaabo ah. Tani micnaheedu waa in adiga iyo shaqo-bixiyahaaga labadiinuba aad haysataan wakhti tijaabo oo ah ugu badnaan lix bilood si hadhow loo eego haddii aad ku haboontahay shaqadan. Haddii shaqo-bixiyuhu kugu qanacsanyahay iyo haddii adiguna aad doonaysid inaad sii wadato waxay shaqadan tijaabada ahi si atomaatig ah isugu baddelaysaa shaqo joogto ah.
Shaqo ku salaysan wax qabad
Shaqo ku salaysan wax qabad waxay tahay inaad mushahaaro ku helayso wax qabadkaaga. Tani waxay ahaan kartaa tusaale ahaan iibinta telafoon wicida ama in la soo jiito dad gala heshiisyada barnaamijyada kanaalada tiifiiga. Mararka qaarkood waxaa mushahaarada wax qabadka lagu daraa nooc ah mushahaaro aasaasi ah.
Shaqo ku meel gaar ah waa nooc shaqo wakhti go'an ah oo waxay tahay inaad u soo galaysid inaad baddesho qof tusaale ahaan xanuusanaya, fasax ah, si ku meel gaar ah u haya hawl kale ama fasax caruur ku jira. Dhanka laamo shaqo oo badan waxay tahay dariiqa lagu helo shaqo joogto ah in la sii maro shaqo ku meel gaar ah.
Shaqo cayiman waa shaqo wakhti go'an ah. Waxay ahaan kartaa shaqo ku meel gaar ah, shaqo xilliga xagaaga ah, shaqo mashruuc ama in si ku meel gaar ah loo soo galo marka shaqo-bixiyuhu u baahanyahay shaqaale dheeraad ah. Haddii aad soo haysatay shaqo cayiman in ka badan laba sano xilliga muddo ah shan sano waxaad xaq u leedahay shaqo joogto ah.
Is shaqaalayn gaar ah
Markaad ku shaqayso inaad adigu isu shaqaysid waxaad heshiis la leedahay shirkad ah shaqaalaynta gaarka ah. Waxaad shaqayn kartaa adigoo aan ahayn shaqaale iyo adigoo aan ahayn qof leh shirkad gaar u ah. Shirkada shaqaalaynta gaarka ah ayaa habaynaysa faktuurada iyo dhamaan wixi kale ee ah maamulka ee u dhaxeeya adiga iyo kuwa hawsha loo qabanayo. Shirkada shaqaalaynta gaarka ah waxaa kale oo ay leedahay mas'uuliyada shaqo-bixiye, soo bandhigida kharashyada shaqo-bixiyaha, samaysaa jaritaanka canshuurta oo bixisaa mushahaaradaada.
Haddii aad shaqaale u tahay shirkadaha shaqaalaha ka sii kireeya shirkad kale waxaa markaa laguu kireeyay la-taliye ahaan. Waxaad shirkada sii kireysa shaqaalaha ka helaysaa mushahaaro bil ahaan ah, laakiin waxaad hawlahaaga shaqo ka qabanaysaa adigoo la jooga macmiil.
Hey’adda deegaanka shaqada - Waxaad xaq u leedahay maalin shaqo oo amaan ah